Ziziphi izixhobo onokulucebisa ukuba ulandele i-Amazon yokuthengiswa kwamashishini?
Ukuhlalutya ukhuphiswano luyinxalenye ebalulekileyo yophando ephathwayo ngumthengisi ngamnye ophumeleleyo kwi-Amazon. Ukuba ufuna kwakhona ukulandelela i-Amazon yokuthengiswa kwabaqhubi bakho, nantsi iphepha elifutshane lokusebenzela ukukunceda. Ingaba ukhuphiswano lwakho lukhulu kakhulu? Yintoni enokwenziwa ngcono? Ngaba imveliso yakho ilungile njengoko uluhlu lwakho luthi? Nazi izinto eziphambili ukuba ugcine ingqwalasela echanekileyo-ukuphononongwa, ukukhuthazwa, kunye nokubhala uluhlu. Masibone ngabanye ngaphantsi.
Ayikho-brainer, kodwa ukuhlaziywa kuyimithombo enomthombo wophando lophando lokuqala. Asikho isidingo sokuthi ukuhlaziywa kwabathengi kumveliso ofanayo kunokukunika ingcezu yengqondo malunga nokuba yintoni inokuphuculwa ngayo, okanye i-vice versa igwenywe. Kwaye umgaqo wesigxina kukuba abathengisi abahlanu abaphezulu ababonelela ngemveliso efanayo banento ethile malunga nokuhlaziywa kwabathengi abangamakhulu amathathu. Kodwa isabelo seengonyama sathengi abathengi ngokugqibeleleyo siza kunye ngaphandle kokushiya impendulo. Ngoko, yintoni enokuyenza naleyo? Ndiyincoma ukusebenzisa i-Feedback Genius ithuluzi le-inthanethi ekhululekile. Ngeke kuthumelele kuphela isaziso kuyo yonke ingxelo engalunganga okanye ukuphononongwa kwamakhasimende ukuba ube nokulungiswa ngokukhawuleza kwesaziso esifutshane kodwa kwenza kube lula ukuthumela i-imeyli ngokuzenzekelayo, ekhonza njengesikhumbuzo esihloniphekileyo esicetyisa ukuba wonke umthengi osandul ubungqina.
Ngamanye amaxesha abaqhubi bakho abasondeleyo banokugqithiswa ngokukhawuleza ngeentengiso ezinkulu, kwaye inani elininzi lemiyalelo eqhubekayo eqhutywa yipromosi iphathwa ngendlela efanelekileyo. Kwaye xa uqaphela ukuba isicwangciso esikhethekileyo somncintiswano okanye nje icebo elincinci elisebenza kakuhle-kutheni ungalandeli i-Amazon yokuthengisa kunye nenzame yokukhuthazwa komdlali wakho ukuba usebenzise amacandelo anamandla kunceda? Yilapho i-Big Tracker inthanethi isebenzisa. Ngesi sixhobo esinceda, awukwazi ukulandelela ukuthengiswa kwe-Amazon yokuthengisa, ukuhlawula ixabiso lentengo yabathengi bakho kodwa ugcine phantse yonke idatha yokupapashwa kwirekhodi. Cwangcisa ukuhamba kwakho okulandelayo ukuba sele uyazi ukuba ngabaqhubi bakho benza ntoni kangcono ukuba ulandele ukulandela.
Lo ngummandla wokugqibela ugxininisa ukuhlala ukhuphiswano. Kwaye ukuphucula umgangatho wohlu lweemveliso kunye nomgudu wokulungiswa ngokufanelekileyo yiyona nto iqhelekileyo ekukhokelela ekugqithiseni okulungileyo kwi-intanethi yophando ngaphaya kwalo. Nantsi indlela onokuyithatha ngayo - i-Amazon ithatha i-keywords yokuthengisa amagama asetshenzisiweyo asetyenziswa ngabadayisi abaphezulu ukuba bazise ezona zizodwa kwiimpawu zeemveliso zakho, iinkcazo, iingongoma zebhulogi, njl njl. Ndiyincoma ithuluzi le-Jungle Scout eliza kukulondoloza iiyure uphando olunzulu nolunzima. Ukuhlola ama-key metrics akho abambiswano kunye nokufumana iziphakamiso zegama eliphambili kunye nengqiqo ebalulekileyo ekusebenziseni imigaqo-magama yokukhangela imilenze eyona ndlela ihlakaniphile. Unokujonga kwakhona ithuluzi leMarchant Words, elijoliswe ngqo kwi-Amazon search trends, kunye nemigangatho ephezulu yokukhangela kunye namagama angundoqo asetyenziswa ngabathengi abaphila ngaphaya kwalo.